DF iyo Jubbaland indhaha ka daawanaya gardarrada Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
DF iyo Jubbaland indhaha ka daawanaya gardarrada Kenya
CEELWAQ, Soomaaliya - Dadka ku nool gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarado dagaal oo ay leeyihiin milatariga Kenya ay maalmihii la soo dhaafay si aan kala sooc lahayn u duqeeyeen dhulka miyiga ah ee u dhow magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Warbaahinta Qaranka, ayaa laba maalin ka hor sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee Kenya ay duqeymo cirka ah ka fuliyeen tuulooyinka Meri, Labi-Jaw, Abroon, Qolqola-Cali iyo Warbeelle oo hoos yimaada magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, iyagoo dilay xoolo, sida ay xaqiijiyeen dadka degaanka iyo mas’uuliyiinta gobolka.
Keydmedia Online, waxa ay xasuusataa, in 10 June 2021, Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Cusmaan Dubbe, oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho, uu Dowladda Kenya, uga digay in ay duqeymo ka geysato gudaha dalka Soomaaliya.
"Kenya waxaanu u sheegeynaa in aysan kusoo xad gudbin hawada Soomaaliya, waxaan kaloo u sheegeynaa in aysan fulin duqeyn dambe oo aysan la socodsiin dowladda Soomaaliya iyo Ciidamada AMISOM". Ayuu xilligaas yiri Wasiirka Warfaafinta.
Hayeeshee, hadalka dhawaan lagu baahiyay Warbaahinta Dowladda, aya u muuqday mid ay Dowladdu u aragtay arrin caadi , mana jirto cid ka hadashay falkan waxashnimada ah. KON, ma xaqiijin karto in Kenya ay DF iyo AMISOM, la wadaagtay deqymaha ay ka fulineyso gudaha Soomaaliya.
25 September 2021, Sarkaal sare oo katirsan Xukuumadda Nayroobi, ayaa u sheegay Daily Nation, in Uhuru uu qaadici doona go'aanka badda ee laga sugayo Maxakamadda ICJ, 12-ka bisha October 2021, wixii xilligaas ka danbeeyana Kenya waxa ay wadday xasuuqa shacabka.
Xiriirka Diblumaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa caadi ku soo laabtay dhawaan, kadib markii Farmaajo uu muddo ku rafanaya xiriirka dalalka dariska ah.